Tababare Solskjær oo ka hadlay guushii ay Man United ka gaartay Burnley… (Muxuuse ka yiri Greenwood?) – Gool FM
(Manchester) 18 Abriil 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ka warbixiyay guushii ay kooxdiisa ka gaartay naadiga Burnley.
Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford guul xasilooni leh kaga gaartay kooxda Burney, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar ka tirsaneyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Haddaba Ole Gunnar Solskjær oo la hadlay warbaahinta kaddib ciyaarta ayaa wuxuu u sheegay:
“Marna ma ogaan kartid waxa dhici doona kulammada nuucaan oo kale ah, Burnley waa koox caan ku ah kubaddaha sarre, waxayna leedahay tayo gaar ah oo ay kaga faa’ideysan karto, waxaan gacmaha saarnay wadnaha kubad kasta oo hawada ku socota oo ay soo tuuraan.”
“Waxaan dhallanay goolashii aan dooneynay, isla markaana aan ula tacaalnay cadaadiska ciyaarta sidii la rabay, ugu dambeyntiina waan gaarnay wixii la rabay waana ku guuleysanay ciyaarta.”
“Waan ka niyad jabnay gool nalaga dhaliyay isla markii aan dhalinay goolka koowaad, waan ogeyn inay ciyaari doonaan kubaddaha dhaaheer, isla markaana ay aheyd inaan si buuxda u shaqeyno dhammaan daqiiqadaha ciyaarta.”
Intaas kaddib Ole Gunnar Solskjær ayaa ka hadlay xiddigiisa Mason Greenwood, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan u faraxsanahay isaga dartiis. Wuxuu ku ciyaaraa gudaha xerada ganaaxa iyo banaankaba, way fiicantahay in garoonka lagu arko, wuxuu muujinayaa natiijada shaqadiisa tababarka.”
“Greenwood wuu yaraa sanadkii hore, hadana wuxuu ku dhowaad laba xili ciyaareed la qaatay kooxda koowaad, waxaana arkay sida uu u sameeyay hormar layaableh bilihii la soo dhaafay, waa ciyaaryahan hal abuur leh wuxuuna ku ciyaaraa qaab fudud oo raaxo leh.”
Horudhac: Leeds United vs Liverpool... (Labada kooxood oo caawa doonaya inay mid waliba gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah Premier League)